जीवनमा सफल हुन के गर्नुपर्ला ? डा. राम बहादुर बोहराका उपयोगी टिप्सहरु – साइन्स इन्फोटेक
डिसेम्बर 16, 2019 डिसेम्बर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments सफल, सफलता
आज हरेक व्यक्ति सफल हुन चाहन्छन् तर सफल हुन सकिरहेका छैनन् । व्यक्तिसंग सवैथोक छ तर सोचेको काम हुन सकेको छैन । कतिपयले भाग्यलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । आजको लेखमा सफल हुन के के गर्नुपर्छ भन्ने’bout प्रकाश पार्नेछु ।
२. अरुले गरिरहेको काम’bout पत्रपत्रिका किनेर, पुस्तक किनेर, भ्रमण गरेर जानकारी लिनुपर्छ । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ । विभिन्न भाषाहरु सिक्नुपर्छ । आफ्नो लागि पहिरनको छनोट गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
बुद्ध भूमि यो बनाएर सफल बनोस जुनी
नोभेम्बर 30, 2017 नोभेम्बर 30, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0